Ra’isul Wasaare Kheyre oo xiligan Markab Dushiisa kulan kula leh Saraakiil Ajaaniib ah – Balcad.com Teyteyleey
Ra’isul Wasaare Kheyre oo xiligan Markab Dushiisa kulan kula leh Saraakiil Ajaaniib ah
Warar aan goordhaw ka helnay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya iyo xubno la socda ay garoonka ka qaaday Diyaarad Helicopter ah .
Diyaarada qaaday Ra’isul Wasaaraha iyo xubnaha la socda ayaa geysay Markab dagaal dushiisa oo taagan biyaha Soomaaliya, waxa uuna halkaasi Ra’isul Wasaaraha xiligan kulan albaabada u xiran yihiin kula leeyahay Saraakiil ajaaniib ah .
Wararka ana heleyno ayaa sheegaya in Markabka dagaal ee ku sugan biyaha Soomaaliya uuna saaran yahay Ra’isul Wasaaraha in uu yahay mid ay leeyihiin ciidamada Caalamiga ee biyaha Soomaaliya u jooga la dagaalnka Burcad badeeda Soomaalida.
Waxaana la ogeyn waxa looga hadlayo kulanka hada ka socda If you are in need of a cost effective solution for your Rumalaya purchase, you’re in a right place! Buy it for 44.5 USD at our store right away! Markabka dushiisa uu ka qeyb galayo Ra’isul Wasaare Xasan Kheyre, waana markii ugu horeesay inta la ogyahay oo Ra’isul Wasaaraha meel ka baxsan Beriga kula kulmo Saraakiil ajaaniib ah.
Taliyihii Ciidanka NISA ee Gobolka Banaadir oo xilkii laga qaaday